Iray volana maimaim-poana amin'ny mozika Apple ho an'ny miaramila amerikana sy ny veterana | Avy amin'ny mac aho
Volana efatra an'ny mozika Apple maimaim-poana ho an'ny miaramila amerikana sy ny veterana
Averina indray, ny orinasa Cupertino dia manampy fampiroboroboana vaovao amin'ny serivisy mozika mivantana, Apple Music. Amin'ity tranga ity dia momba ny fanomezana maimaimpoana ity serivisy ity mandritra ny efa-bolana ho an'ny tafika amerikana sy ireo veterana rehetra ao amin'ny tafika amerikana. Ireo karazana fampiroboroboana izay fahita ao amin'ny Apple Tsy mbola nifantoka mivantana tamin'ity vondrona ity mihitsy izy ireo taloha, saingy efa fantatsika fa any Etazonia dia tena tia tanindrazana ny zava-drehetra, noho izany ity fanapahan-kevitr'i Apple ity dia tsy mahagaga antsika.
Volana efatra an'ny mozika Apple maimaim-poana ho an'ny veterana miaramila sy tafika
Raha te hiditra amin'ity fampiroboroboana Apple Music ity dia tsy maintsy miditra an-tranonkala amin'ny alàlan'ity ny veteran-tafika sy ny miaramila rohy. Amin'ity fizarana ity dia manazava i Apple fa tapitra ny 1 Aogositra ny kaody fampiroboroboana, ka ireo mpampiasa rehetra izay mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny serivisy Apple Music teo aloha ary ao anatin'ity vondrona ity dia afaka mankafy ny serivisy maimaimpoana amin'ity indray mitoraka ity.
Mety misy ifandraisany amin'ny fialantsasatry ny 4 Jolay ity tolotra ity ary izany no antony nanirian'i Apple hankalazana azy amin'ity vondrona ity izay lehibe dia lehibe ao amin'ny firenena. Raha ny lojika, raha te hiditra sy hankafy ity tolotra ity dia ilaina ny misoratra anarana amin'ny kaonty ID.me, serivisy antoko fahatelo izay manolotra fihenam-bidy ho an'ny miaramila sy ny veterana amin'ny magazay maromaro. Manantena aho fa hanapa-kevitra ny Apple ny handefa ny fampiroboroboana Apple Music efa-bolana maimaimpoana amin'ny toerana maro ary tsy isalasalana fa safidy tena tsara hisarihana ireo mpampiasa ity serivisy ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Volana efatra an'ny mozika Apple maimaim-poana ho an'ny miaramila amerikana sy ny veterana
Rehefa lasa mozika ny kanto. Ity no sary miaraka amin'ny mpandahateny avy amin'i Ikea sy Sonos, Symfonisk
Zava-misy ankehitriny ny metatra gliokaozy ra tsy manafika